रारालाई विश्वमै चिनाउछौँः प्रमुख शाही – Online Jagaran
२६ बैशाख २०७५, बुधबार ०९:२५ May 9, 2018 जागरण
सुर्खेत, २६ वैशाख (जागरण) । स्थानीयनीय सरकार अन्तर्गत जागरण एफ. एम. र www.jagaran.com.np ले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले गरिरेहका काम, आगामी योजना, खेप्नुपरेका चुनौतिलाई समेटेर विभिन्न सामग्री प्रसारण र प्रकाशन गर्दै आएका छौँ । जागरणकर्मी प्रभा रावतले छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका नगरप्रमुख हरिजंग शाहि सँग कुराकानी गर्नुभएकाे छ ।
प्रस्तोताः तपाईँ निर्वाचित भएदेखि तपाइको गाउँपालिकामा गर्नुभएका मुख्य तिनवटा कामहरु के–के हुन् ?
पाहुनाः म निर्वाचित भएदेखी मैले नगरपालिकामा रहेका हरेक वस्तीमा मोटरबाटो जोड्ने क्रम जारी छ । करीव करिव ८० देखी ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । छायारारा नगरपालीकालाई विश्वमा पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा चिनाउने लक्ष्यका साथ यसमा विभिन्न काम गरिरहेका छौँ । र यहाँको शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धी गर्नको लागी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा धेरै लगानी गरेका छौँ ।
प्रस्ताेताः अागामी चारबर्षका लागी तपाइका योजना के के छन् ?
पाहुनाः नगरको फाइल बनाउँदै छौँ । त्यसपछी जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजरगर्दै विकास निमार्णका काम गर्नेछौँ । छायानाथ नगरपालिकामा रहेका विभिन्न धामिर्क तथा पर्यटकिय क्षेत्रको विकास र प्रवद्धनको लागी काम गर्ने योजना बनाउका छौँ । आगामी चार बर्षको लागी हरेक ग्रामीणभेगमा सडक विस्तार गर्ने । शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्ने, तथा नगरपालिकाका पाचँहजार युवालाई रोजगारको ब्यबस्था गर्ने योजनामा छौँ । यो नगरपालिकामा उत्पादन हुने रैथाने बाली उत्पादन गरेर हामेस्टे मार्फत यहाँकाजनताको जिवन स्तरलाई माथी उकास्ने योजना छ ।
प्रस्ताेताः अन्त्यमा तपाइले यसरी काम गर्ने क्रममा कस्ता चुनौती आएका छन् ।
पाहुनाँः काम गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेको कर्मचारी समायोजन नहुदा चुनौती भएको छ । नगरपालीको १४ वटा वडामा २ जना वडा सचिवको भरमा काम गर्न बाध्य छौँ । र नगरपालीकाको सुचनाहरु बाहीर ल्याउन पनि चुनौती छ ।